BPP Challenge Post – Hsu Myat Moe
ခြောက်ကပ်နေတဲ့ blog လေးကိုရေပြန်လောင်းဖို့နှိုးဆော်သူက မ ဖြူစင်သောစိတ်ကလေး နဲ့ မဗေဒါ ။ မရေးတာနှစ်ပေါက်တော့မှာမို့ ဘာရေးလို့ရေးရမှန်းလဲမသိတော့ပါဘူး ။ အလာပသလာပပြောဖို့လည်း ပြောစရာအကြောင်းမရှိသလိုပါပဲ ။ BPP Challenge အတွက် အချိန်မှီရုံလေးရေးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အပြင် စာမရေးတာကြာလို့ထောင့်နေတဲ့စာရေးဟန်တွေကို လျစ်လျူရှုပြီး ၂၀၁၄ အတွက် ပထမဆုံးသောပိုစ့်ကိုနှစ်ကုန်ခါနီးရေးလိုက်ပါတယ် ။
နှစ်ရှည်လများဖြစ်ခဲ့တဲ့ အစာအိမ်ရောဂါက လုံးဝပျောက်ကင်းသွားပါပြီ။ သူဂရုစိုက်ပေးကြောင်းကြွားပါရစိ 😛
Facebook celebrity တစ်ယောက်စကားငှားသုံးရရင် အချစ်ရေးက သာယာဝတီမှာ လေတဖြူးဖြူးနဲ့ အေးဆေးပါ။
Social က zero ထက်ကျော်ပြီး အနှုတ်လက္ခဏာကိုပြတဲ့ကာလပါ ။ အလုပ်နဲ့အိမ်ကလွဲရင် ဘယ်မှကိုမရောက်ဖြစ်ဘူး။ အလုပ်ကဝေးတော့ မနက်မိုးမလင်းခင်သွား ၊ ည မိုးချုပ်မှပြန်ရောက် ၊ ပိတ်ရက်ကျရင် နေ့တစ်ဝက်ကျိူးအောင်အိပ်၊ နိုးရင် သူနဲ့ တွေ့ ။ ရုပ်ရှင်ကြည့် ၊ တစ်ပတ်စာအလုပ်လုပ် ၊ စာအုပ်လေးဘာလေးဖတ် အဲလောက်ပဲလုပ်ဖြစ်ပါတယ် ။ Social မရှိပေမယ့် Social Network ကိုတော့ခဏခဏရောက်ဖြစ်တယ် 😛 ။ Hay Day လေးဘာလေးဆော့ဖြစ်ပါတယ် ။ လယ်ယာစိုက်ပျိူးရေးကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်နေရလို့ ဘလော့ကြီးနဲ့တစ်နှစ်နီးပါးဝေးကွာသွားရတာပါ။ အလုပ်မအားတာလည်းတစ်ကြောင်းပါတာပေါ့ ။
အလုပ်သစ်ကိုပြောင်းလိုက်တာ ငါးလနီးပါးရှိပါပြီ ။ အတွေ့အကြုံအများကြီးရတဲ့အလုပ်မဟုတ်ပေမယ့် ထိုက်သင့်တဲ့လခရယ် ၊ အကုန်လုံးအဆင်ပြေမယ့်ပုံရှိတာရယ်ကြောင့် ပြောင်းလိုက်တာပါ ။ မပြောင်းလို့လဲမရဘူး အရင်အလုပ်က branch ဖျက်လိုက်တာဆိုတော့ တခြားနိုင်ငံကိုမသွားနိုင်တာမို့ ပြောင်းလိုက်ရပါတယ် ။ တခြားနိုင်ငံမှာနေပါ…..နေစရိတ်၊စားစရိတ် free လခကလည်း အလုပ်သစ်ထက်တောင် အများကြီးပိုပေးမယ်လို့ပြောပေမယ့် တခြားနိုင်ငံကိုမသွားချင်သူမို့ ထိုက်သင့်တဲ့လစာလေးနဲ့ရတဲ့အလုပ်လေးကိုပြောင်းလိုက်ပါတယ် ။ အဆင်ပြေလားဆိုတော့ အထိုက်အလျောက်အဆင်ပြေပါတယ်။
၂၀၁၃က အတွေ့အကြုံအဆန်းအပြားတွေကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့တော့ ၂၀၁၄ အစမှာ တကယ်ပဲ အလုပ်တွေရှုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ အလုပ်ဟောင်းက ပိုင်ဆိုင်သမျှ property ကို ဟောင်ကောင် ကုန်ပနီတစ်ခုနဲ့ stock exchange လုပ်လိုက်တာ ကျမတို့တွေပါ ဟောင်ကောင်သူဌေးလက်အောက်ကိုအရောင်းခံလိုက်ရပါတယ် ။ ဟောင်ကောင်သူဌေးတွေရဲ့ ကပ်စီးနည်းတဲ့ဒဏ် ၊ ဖိလစ်ပိုင်လူမျိူးတွေလက်အောက်မှာ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်ကြ ၊ အဆိုးဆုံးကတော့ transparancy မရှိတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးကိုစိတ်ကုန်ကြတာမို့ တစ်ရုံးလုံးအလုပ်ထွက်ကုန်ကြတာပါ ။ ကျမတို့ pass သမားတွေကျတော့ အလုပ်ကလည်းမလွယ် ဒီကြားထဲမှာ ၃ ယောက်တည်းသာရှိတဲ့ IT Department မှာ အကြီးဆုံးမန်နေဂျာ (စင်ကာပူနိုင်ငံသား) က တစ်လ notice ပေးပြီးထွက်သွားပါလေရော ၊ အလုပ်တွေအကုန်လုံးကို စီနီယာနဲ့ ကျမတို့နှစ်ယောက်ကိုခွဲပေး ၊ တခြားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ branch တွေရဲ့ IT တွေကိုခွဲပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျန်ခဲ့တဲ့ စီနီယာက မလေးတရုတ် စိတ်ထားခပ်ပုတ်ပုတ် ၊ ကျမကိုအသိမပေးဘဲ အလုပ်ထွက်ပစ်လိုက်ပြန်ရော ၊ အလုပ်တွေ ၊ တာဝန်တွေတပုံတပင်ကြားထဲမှာ ကျမတစ်ယောက်တည်း Auditor တစ်အုပ်စုနဲ့ ကျန်ခဲ့ရပါတယ် ။ လုပ်သက် ၃ နှစ်နီးပါးပဲရှိတဲ့ ကျမကို IT Audit အတွက် Lead အနေနဲ့ထားပြီး စစ်ကြဆေးကြတယ် ။ လုပ်သက် နှစ်ပေါင်းတစ်ဆယ်ကျော်ရှိတဲ့လူတွေက Audit ကိုရှောင်ပြီးပြေးကြပေမယ့် pass သမားကျမကတော့ မပြေးနိုင်ခဲ့ဘူး ။ ဒီကြားထဲ branch ကို ဖျက်မယ်လို့သာပြောတာ ဘယ်နေ့နောက်ဆုံးလဲဆိုတာကို ဟောင်ကောင်သူဌေးတွေ လုံးဝအတိအကျမပြော ။ ဟိုနေ့လိုလို ဒီနေ့လိုလိုနဲ့ အနည်းအကျဉ်းကျန်နေသေးတဲ့ စလုံးရုံးရဲ့ ၀န်ထမ်းတွေနဲ့အတူ ၊ တတ်နိုင်သမျှလုပ်ပေး တခြားနိုင်ငံက အိုင်တီတွေကို တာဝန်ခွဲပေးပြီး တစ်လတိတိလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ် ။ အလုပ်နောက်ဆုံးနေ့မှာ လစာနဲ့အတူတူ နောက်တစ်လစာ (စုစုပေါင်း လခ နှစ်လစာထက်နည်းနည်းပိုစွန်းတဲ့ငွေ)ကို အပိုအနေနဲ့ရရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးကျန်ခဲ့တဲ့ တစ်ယောက်တည်းသောအိုင်တီမို့လို့ ခွင့်လည်းယူလို့မရ ၊ အိမ်လည်းပြန်လို့မရဘဲ ခွင့်အစား ပိုက်ဆံတွေပဲရခဲ့ပါတယ်။ အလုပ်သစ်ကိုလည်း အလုပ်ဟောင်းကနေထွက်ပြီး နောက်နှစ်ရက်မှာပဲ ၀င်လိုက်ရပါတယ် ။ တစ်ရက်က public holiday မို့လို့ နားလိုက်ရတာပါ။ အလုပ်ဟောင်းမှာကျန်ခဲ့ရတော့ ပျော်စရာကောင်းတာတစ်ခုက account dept က စာရင်းကိုင်တွေနဲ့ ထမင်းအတူတူစားကြပြီး အလုပ်တွေရှာကြ ၊ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် recommend လုပ်ကြ ၊ အင်တာဗျူးတွေသွားကြ ၊ အလုပ်အကြောင်းအတင်းပြောကြနဲ့ အမောတွေကြားထဲပျော်စရာကောင်းခဲ့ပါတယ်။
အလုပ်သစ်က သဘောင်္အသေးတွေထုတ်တဲ့ကုန်ပနီ ။ အိုင်တီဌာနက လူ ခြောက်ယောက်တိတိရှိပြီး လူမျိူးဘာသာမတူကြတဲ့သူတွေချည်းပါပဲ။ မန်နေဂျာနဲ့နောက်တစ်ယောက်က စလုံးတရုတ် ၊ ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်က မလေးတရုတ် ၊ နောက်နှစ်ယောက်က ဖိလစ်ပိုင် ဆိုတော့ ဘာသာမဲ့တွေရော ၊ ခရစ်ယာန်တွေနဲ့အတူ ဗုဒဘာသာကတော့ ကျမတစ်ယောက်တည်း ။ ပြီးတော့ အကုန်လုံးက ဘာသာစကားနှစ်မျိူးသုံးမျိူးလောက်အသာလေးတတ်တဲ့သူတွေချည်းပဲဆိုတော့ တရုတ်လိုပြောလိုက်၊ မလေးလိုပြောလိုက် ၊ အင်ဒိုလိုလည်းပြောတတ်တဲ့သူပါသေးတယ် ။ တခါတခါ ဂျပန်လိုတွေထထပြောလိုက် ပြင်သစ်လိုပြောလိုပြောနဲ့ရယ်ရပါတယ်။ အလုပ်က သိပ်စိတ်ဖိစီးမှုမရှိတဲ့အပြင် စက်မှုဇုန်ထဲမှာလုပ်ရတာမို့ အိုတီလည်းမဆင်းရပါဘူး ။ အလုပ်သစ်ထဲကိုကျမရောက်ပြီး နောက်တစ်လမှာ အကောင့် assistance မြန်မာအမတစ်ယောက်ရောက်လာပါတယ်။ မြန်မာရောက်လာလို့ပျော်ပေမယ့် တစ်လအတွင်းမှာ သိပ်အပူအပင်များပြီး ကျမကိုသူ့ရင်ဖွင့်ရာမှတ်သူမို့ ခုတော့ ခပ်ဝေးဝေးကနေပဲ နေနေရတယ် ။ လူတိုင်းမှာ ပူပင်သောက ကိုယ်စီရှိကြပေမယ့် လူတစ်ချို့က ကိုယ့်အပူမှ အပူလို့မှတ်ကြတယ် ၊ ပြီးတော့ သူပြောသမျှကိုနားထောင်ပြီး တောက်လျှောက်သူ့ရဲ့ အဆိုးမြင်မှုတွေကို လိုက်ပြီးဖြေသိမ့်ပေးနေရတော့ ကြာရင်စိတ်ညစ်လာတယ် နောက်ပြီးကိုယ်လည်းအဲလို အတ္တကြီးကြီးနဲ့ အဆိုးမြင်ဝါဒီဖြစ်သွားမှာစိုးရိမ်လို့ပါ ။ ပေးသောလက်မို့လို့ ပေးခွင့်ကြုံတာ ၊ နားလည်တတ်သူမို့ ဖြေသိမ့်ပေးနိုင်တာဆိုပေမယ့် မနက် ခုနစ်နာရီကနေ လမ်းပေါ်ကိုရောက်ပြီး ကားပေါ်တက်ကတည်းကနေ သူ့ယောက်ျားနဲ့ relationship အကြောင်း ၊ ဆွေမျိူးမကောင်းကြောင်း ၊ ယောက်ခမ မကောင်းကြောင်း တွေနားထောင်ရတာ ကြာရင်စိတ်ပျက်လာမိပါတယ်။ အလုပ်အသစ်ဆိုတော့ သူက သူနဲ့ရာထူးတူတဲ့တစ်ယောက်လောက် လုပ်ပိုင်ခွင့်မရတာ ကို စိတ်တွေဆိုးနေတာပါ ။ ရာထူးချင်းတူပေမယ့် အသစ်ဝင်တဲ့သူနဲ့ နှစ်ဆွေးအောင်လုပ်နေတဲ့သူနဲ့ ဘယ်သူ့ကိုပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချမလဲဆိုတာ ကလေးကအစ သိကြတဲ့ကိစ္စပါ (ဥပမာ- အဲဒီတစ်ယောက်ရဲ့ လက်မှတ်ပါရင် ဘဏ်ကငွေထုတ်လို့ရတယ်…ငါ့လက်မှတ်ကျဘာလို့မရတာလဲ ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိူးတွေပေါ့) ။ သူက ဒီမှာနေတာ ရှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီ ။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းထိုအပူတွေ ၊ ယောက်ျားကိုစိတ်မချတဲ့အပူတွေကိုနားထောင်နေရတာ ကျမတော်တော်စိတ်ညစ်မိပါတယ် ။ ပြီးတော့ သူက စကားပြန်ပြောရင် သူစိတ်ကရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်နေတာ ။ သူပြောတာကိုနားထောင်ပြီး ပြန် follow လုပ်ရင် ဖုန်းကြည့်ချင်ကြည့်နေတာမျိူး ၊ ဘာမှပြန်မပြောဘဲတိတ်သွားတာမျိူးဆို သိပ်အာရုံနောက်စရာကောင်းတာပဲ ။ တစ်လကျော် နှစ်လနီးပါးဒဏ်ခံလိုက်ရပါတယ် ။ နောက်တော့ ကျမရှောင်တာကိုရိပ်မိသွားပုံရပါတယ် ။ တခြားကားကိုပြောင်းစီးသွားလို့ ခုမှစိတ်ချမ်းသာရတာပါ။
စုမိဆောင်းမိတစ်ပြားမှမရှိ ။ ပိုက်ဆံတွေရပြီး ဘယ်နားရောက်သွားလဲမသိဘူး ။ ဖုန်းတောင်အသစ်မလဲနိုင်ဘူး ။ မွဲချက် ။
အဲစုမိဆောင်းမိရှိတာဆိုလို့ ဗိုက်ရယ် အဆီရယ်ပဲရှိတယ်။
အသက်ကြီးလာလို့လားမသိဘူး အလှအပလည်းသိပ်မက်လာတယ် ၊ brand တွေကိုလည်းမက်လာတယ်…ကောင်းတာကိုမှ ကြိုက်ကြိုက်လာတာမျိူးပါ ။ အိတ်အသစ်တွေလည်းအများကြီးလိုချင်တယ် ၊ Sephora တစ်ဆိုင်လုံးပိုင်ချင်တယ် ၊ top shop တစ်ဆိုင်လုံး nichii တစ်ဆိုင်လုံးပိုင်ချင်တာမျိူး ။ ဖိနပ်အကောင်းစား ပျော့ပျော့လေးတွေလည်းအများကြီးလိုချင်တယ် ။ ပိုပြီးလည်းလှချင်တယ် ပိုပြီးလည်းပြင်ချင်တယ် ပိုလည်းနုချင်တယ် ။ဒီထက်အလှတွေပိုပြင်ပြီး စာအုပ်လေးဖတ်လိုက် အပြင်လေးသွားလိုက် ကျော့နေအောင်နေချင်တာ ဘာအလုပ်မှလည်းမလုပ်ချင်ဘူး ။ (ဟမ်…အကောင်းမကြိုက်လိုက်တာနော်) ။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်း နိစ္စဓူဝ လူနေရတာကတော့ မနက်ခုနစ်နာရီ နှစ်ဆယ် office transport ကိုရောက်ဖို့ စောစောထ ၊ ရေချိူး ၊ မျက်နှာသစ် ၊ အကျီလဲ အပြင်ထွက်ပြီး ပြေးရတာမျိူး ၊ မိတ်ကပ်လား ရုံးရောက်မှာလိမ်း၊ မလိမ်းချင်ရင် မျက်နှာပြောင်နဲ့နေ အဲလောက်ပဲတတ်နိုင်ပါတယ် ။ ကျော့ဖို့မော့ဖို့နေနေသာသာ ရှောပင်းဆိုတာ ဝေလာဝေး ၊ ရှိတာတွေကိုပဲလှည့်ပတ်ဝတ်နေရတာမျိူး ။
ငယ်သူချင်းတစ်ယောက်ကို စိတ်နာနာနဲ့ block လုပ်ပစ်တယ် ။ သူငယ်ချင်းဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ နားလည်ပေးခဲ့တာကြာပြီ ။ ဒါပေမယ့်တရားလွန်လာတဲ့အတွက် block လုပ်ပစ်တာ။
စာမရေးဖြစ်တဲ့လပေါင်းများစွာအတွက် တောင်းပန်ပါတယ်လို့ ။
16 thoughts on “BPP Challenge Post”
ညီမလေးရေ Challenge လေးအတွက်ရေးပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့. အချစ်ရေးက သာယာဝတီမှာ လေတစ်ဖြူးဖြူးနဲ့ ဆိုလို့ သဘောကျသကွဲ့.
အားရင် အချိန်ရရင် စာတွေ ပြန်ရေးပါနော်.. ကိုယ်တိုင်လဲ ပျောက်တတ်သူမို့ ပျောက်သွားသောသူများကို လည်း နားလည်ပေးတတ်ပါတယ်လို့ ..
ဟုတ် မရယ်… tag လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ရော မုဒ်သွင်းပေးတဲ့အတွက်ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်…း)
အလုပ်သစ်မှာ အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ ဝမ်းသာပါတယ်..
စိတ်ချမ်းသာအောင်နေနော်။အဝေးမှာတစ်ယောက်တည်းနေရတာ(အဲဟုတ်ပါဘူး..သူကကိုကိုနဲ့ 😛 )
အသူလည်းတစ်ယောက်ရှာလေ……..သူ့ဖြင့် ဂျီးများနေပြီးတော့ 😛
ပေါ်တော်မူ ပျောက်ချက်သားကောင်း။ 🙂
ဟုတ်ပါ့မြတ်ကြည်ရယ်…။ မတွေ့တာ တော်တော်ကြာပြီ… ရန်ကုန်မှာပျော်နေတယ်မလားး)
အဆင်ပြေတာတွေ ဖတ်ရလို့ စိတ်ချမ်းသာကြောင်း
ကျေးဇူးပါ စင်စင်ရယ်း)
ညိမလေးဆုမြတ်ရေ မတွေ.ရတာကြာပြီ မလေးကသတိရလျှက်ပါ။ စာတွေရေးအုံးနော်။ ပျော်ရွင်ပါစေ။
သတိရလို့ ကျေးဇူးပါ မလေးရယ်..။
စုမိဆောင်းမိတာသဘောအကျဆုံး သူများတွေကတော့ မစုမိသေးလို့ မပြန်ကြဘူး စုမိလို့ပြန်ကြတယ်
ဒီကတော့ တပြားမှမစုမိဘဲ ပြန်တယ် ကဲ ဘာပြောမလဲ ဟိဟိ
ကိုရင် ရှိတာပဲ အေးဆေးပါ ချစ်မရာ 😛
ညီမလည်း ဗိုက်ကလွဲရင် ဘာမှမစုမိဘူး…ဟီးးး ဒါပေမယ့် ပြန်ချင်ရင် ပြန်ပစ်မှာ 😛
လာလည်တာကျေးဇူးပါ ချစ်မ ။